Tixda Miski: Xasan Ganey Nolosha Dhabta Ah Buu Doortay - WardheerNews
Tixda Miski: Xasan Ganey Nolosha Dhabta Ah Buu Doortay
Waxa aan u malaynayaa su’aasha muranka leh ee ugu horrayn, ku soo dhacaysa dersaha tixda Miski ee Xasan Cabdllaahi “Xasan Ganey” waa qoddobka mudanka ah ee ay ku aroorayso. Xasan tixdan naftiisa ayuu kaga hadlayaa oo duunkiisa, damiirkiisa iyo dadnimadiisa ayuu ka warramaa. Haddana waayaha ku heeraara iyo awaalaha adduunka bulsho siyaasaddeed ee uu marna ku dhexnool yahay, marna qudh ahaantiisa debedda ka ah, ayuu hoos u muquurayaa oo uu ina muquurinayaa. Marka kale na, halganka uu naftiisa la galay, hubka uu ku dirirgalay iyo quwadda uu cuskaday iyo libinta uu haleelay, ayaa ah qoddob ay tixdu ka hadlayso. Halka, uu ugu dambayn sahankiisu tegay ee baaqiisu ka yeedhay na waa qoddob kale. Waxaa qoddob muuq dheer ah oo si gaar ah kuu dareenjiidanaya ammaanta nabi Maxamed(scws). Sidaa darteed, Miski waa tix wejiyo badan oo adduun ballaadhan hadba dhinac kaga imanaysa. Dhinacyadaas oo maskaxda akhristaha iyo dhegeystaha ku murmaya ayuu, isla markii, ku shubayaa qaabab farshaxannimo oo maansada Sooomaalida ku hor leh.
Waxaa la igu yidhi waa tix nabi ammaan ah. Waxaad odhan kartaa waa run. Waa nabi ammaan, hase yeeshee ka badan. Waxa aad is odhan waa awaalewarran iyo hogatus suugaaneed, waa murti adduun iyo xaaladdii ku saabsan. Ayadu na waa run. Haddana waxaad tidhaa waa waano iyo wacdi diineed ka digaya maalinta Alle la hortaagan yahay, waana durraamsho Alle dembi dhaaf ka tuugaysa. Waa halka ay tixdu, aakhirka fadhiisanayso oo waa run. Summad ma ayey leedahay oo aynu siinnaa tixdan cajiibk ah? Intaba u daa. Haddana intaa uun ma aha. Dhismaha tixda, qaybaheeda kala toyashada ah iyo sida goonigoonida ah ee mid waliba ammaanta nabiga(scws) ugu gororaysa ayaa ugub ah oo aan tixdan looga horraynin. Waxaa raaca qaab hor leh oo fiiro gaar ah mudan. Aynu arrimsahaas u tallaaboqaadno oo marba heer wax yar isdul taagno.
Ta u horraysa, Xasan bilowga, ma araranayo ee afaaf sugan buu tixda ka guda gelayaa. Malaha, rag iyo dumar ba, qof waayaha bulshadiisa jiray oo caroogga suugaanta u siday, ereyga samodoonna aan maalinna dhulka dhigin, asaga oo weli faro madow jooga, haddii uu dhega adayga bulshadiisa ka cawdo, ama ba intiisa sheegto, waa gartii oo layaab ma laha. Xasan waxa uu tixdiisa ku billaabay, wax badan oo uu bulshadiisa waano yidhi iyo halka uu maanta ka taagan yahay. Intaasi waa ka hordhac iyo arar ka duwan tii soojireenka ahayd; waayo, ugu horrayn tixdan, maansoyahanka Xasan Cabdillaahi, waa Xasan Ganeye, naftiisa ayuu inagu barayaa. Isahaantiisa ayuu meel sugan dhigayaa. Asagu dabcan, ma aha geed ka baxay ban aan geed kale ku oollin, noole kale na aanu joogin. Waagiisa iyo awaalaha ka jira, shar iyo khayr ba, inta ku hirdamaysa, wax badan buu hordhaca inagu tusayaa.
Nolosha qofka aadanahu, teeda ifka iyo teeda aakhiro ba, waa doorashadiisa xorta ah. Qof ay hawada naftiisu qaadatay oo hungurigiisa raacay, oo caqligii iyo damiirkii Alle ammaaneeyey, dheg u dhigi waayey, ama ku caasi noqday, noloshii Alle la doonay buu xooray; dhimasho if iyo aakhiroba ah buu doortay. Ammaanadii xorriyada doorashada samaha na wuxuu ka doorbiday addoonsiga hawada nafta iyo shaydaanka adeegsada. Addoonimada sharfani waa ta Alle loo addoon yahay. Ayadaa na xor lagu yahay oo nolol ah. Qof aan nolosha aadanaha ku habboon noolayni ma noola; waa bakhti soconaya. Jiritaanka qofka, taas baa dhabaysa. Qof waliba na asaga ayaa taas iyo sida kale ba, naftiisa u doora.
Tuduc dheer oo labaatan meeris ka badan buu ku talaxtegayaa inta xumo uu qayrkii ku kaco ee dhimashada if iyo aakhiro laga dheefo. Jidka nolosha dhabta ah ee uu naftiisa u dooray buu farshaxnimo qarqoorayaa. Waa laba jid oo mid ba miishiisa wax geeyo. Mid sharqabahaa leh oo naarta ayuu wax geeyaa; ka kale waa jidkii Nabi Maxamed(csws) oo asaga ayaa lagu la rafiiqaa. Kan dambe ayuu Xasan doortay. Go’aanka xorriyadda iyo nolosha dhabta ah ayuu qaatay. Maalinta ay u daran tahay, in uu maciisa noqdo oo uu xawdkiisa ka cabbo ayuu ka doorbiday, la-moodda ifka lagu hayo. Asaga oo naftiisa la hadlaya waxa uu leeyahay:
Weligeed ba suugaanta Soomaalidu way taqaannay qofayn ama wax aan dad ahayn oo laga hadliyo. Oollinta lamataabtaanku na ka ma wada maqnayn. Maahmaahda tidhaa “Illayn” ama “illeen talo isu ma kaa sheegto” ayaa u tusaale ah oo taladii ayey ka dhigeen wax nool oo meeljoog leh oo hadlaya. Wax badan oo ah habardugaag hadlaya oo sida dadka u dhaqmaya, ayaa suugaanta Soomaalida ka buuxa. Xasan Ganey, sida ay ila tahay, tan horteed ba, dheeraad buu taas ku lahaa. Weliba asagu ka ma hadlin oo keli ah ee ma-noolaha wuu ba la hadlay. Tusaale ahaan, tixdiisa Dhegdheer(1982kii), geedka dhillowyanka oo ay suugaanta Soomaalidu, badi ba ugu sarbeebato deriskunoolnimo, toos buu u la hadayaa oo waxa uu ku odhnayaa:
Sida uu u wado, ayuu sowsaba iyo samada ina la korayaa. Mar qudha ayuu ina soo dejinayaa. Adduunkii quruxda, waxa uu haddda, ku soo hoorinayaa ammaanta nabi Maxamed(scws). Inta uu mar keli ah kaa dhexqaado gaafaantii ahayd quruxda midabbada, gelbiskii dayaxa, daruuraha iyo xiddigaha, ayuu ammaanta Nabiga (csws) ka kor kaga keenayaa.
Quraankoo mucjiso ayuu mulkiyoo
Tixdu guud ahaan, fartii Xasan Ganey bay leedahay. Ereyga iyo suuradaha hummaagga toolmoon iyo toyashada murtida mugga leh; shareereyaasha duurxulk fog leh iyo shubaalinta hadalka inta ba, dhiskii maansada Xasan Ganey ku goonida ahayd, bay txidani wadataa. Waxaa si gaar ah tixdan u sii astaynayaa oo ayadana maansada Xasan lagu yaqaan, sunsuminta sadarrada tixda ee uu, sida goonida ah ugu adeejiyo xidhiidhiyeyaasha hadalka , sida iyo, ee, oo. Xidhiidhiyeyaashanu tebinta macnaha sadarrada iyo tuducyada tixda ayey sululuxiyaan oo ay bilciyaan. Maansada Xasan Ganey baa, si gaar ah, ugu suntan taas oo lagu yaqaan.
Ugu dambayn, waxaynu hore u nidhi tixdan Miski, ta uu Xasan qofnimadiisa u dooray buu ina soo hordhigayaa. Daw cusub buu maansadan mariyey, waa na jid uu maansoyahanka kasta oo kale na uu wax ku tusayo. Waxaa sweeye, soojireenkii maansada Soomaalida, gabaygu waxa uu ku caan ahaa arar iyo dhextaal uu maansoyahanku isku faaniyo, qaayaha tixdiisana ku buunbuuniyo. In kasta oo aan isla-weynida la ammaani jirin, hadda na dhaqan bay ahayd oo gabaygaaga lagu ma qoonsan jirin. Xasan Cabdillaahi “ Xasan Ganey” tixdiisan Miski, doorashadiisa nolosha, if iyo aakhiroba ah, ayuu jid hor leh u furayaa. Dawga dadnimada ku wacan buu qaaday. Sidaa darteed waxa uu ka xiidhiidh-goostay oo ku falaagoobay jidraacii naftii-hafarka ahaa ee lagu ogaa maansoyahanka Soomaalida. Alle iyo aadamiga ba wuu isu dhuldhigayaa oo kartiisa iyo murtidiisa ba wuu yaraysanayaa. Badweynta tixdiisan Miski oo aanan runtii, garanayn mid la agdhigo, waxa uu inooga dhigayaa bilaale. Waxa la yaab leh sida ay u kala fogyahiin tixdan iyo tilmaanta Xasan naftiisa ka bixinayaa. Murti la tirshaba qayrkii baa iska leh; asagu se tiisa waxa uu ku sheegayaa luggooyo. Tusaale ahaan, maahmaahahan soo socda oo aanan runtii garanaynin -qurux iyo murti- wax loo dhigo, ayuu ujeeddada quudhsiga naftiisa ugu soo araranyaa:
W.Q Rashiid Sheekh Cabdillaahi X . Axmed (Rashiid Gadhweyne)